प्रेमसंवाद | Jukson
प्रस्तुती ः उमा आलेमगर
प्रेम संवादः रामभक्त जोजिजु—इतु जोजिजु
भनिन्छ, श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध जन्मौंजन्म कायम रहन्छ । उनीहरु एक–अर्काका परिपूरक बनेर जीवनरथ अगाडि बढाउँछन् र जीवनपर्यन्त साथ रहन्छन् । तर पछिल्लो पुस्तालाई हेर्ने हो भने श्रीमान्श्रीमतीको सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न हुने गरेको पनि देखिन्छ । यद्वपी केही यस्ता जोडीहरु छन् जो आदर्श जोडिका रुपमा रहेका छन् । यिनै जोडी मध्ये एक भाग्यमानी जोडी हुन् पोखरेली गायक तथा संगीतकार रामभक्त जोजिजु र गायिका इतु जोजिजुको जोडी । यी जोडी बीच यति धेरै प्रेम र समझदारी छ कि, यो सम्बन्धले १४ औँ बसन्त पार गरिसकेको छ । तर पनि अझै लाग्छ दुवैजना भर्खर प्रेममा परेका हुन् । यो जोडीलाई सबैले प्रेम विवाह गरेको भन्छन् तर यो साँचो होइन । यो जोडीले आज भन्दा १४ वर्ष अगाडी मागी विवाह गरेको थियो ।
पहिलो भेट ः
आज भन्दा १३÷१४ वर्ष अगाडि एउटा गीतको रेकर्डिङ्गको शिलशिलामा भेट भएको थियो ईतु र रामभक्तको । लगन फिल्मको गीतको लागि लेडिज सिङ्गर आवश्यक परेको रहेछ । त्यो गीत गाउन म सेलेक्सनमा परेँ अनि गीतको रेकर्डिङ्ग गर्न जाँदा भेट भएको हो । त्यो गीतमा उहाँले नै संगीत भर्नुभएको हो ।
हाम्रो मागी विवाह हो । प्रेम गर्ने डेटिङ जाने भन्ने चाँहि भएन । हाम्रो प्रायः भेट भईनै रहन्थ्यो र भेट हुने क्रममा उहाँले मन पराउन थाल्नुभएको रहेछ । पछि उहाँको परिवार र मेरो परिवार भेट भयो । विवाहको कुरा भयो । भेट भएको १÷२ वर्ष पछि मागी विवाह भयो ।
उहाँको प्राय हाँसीमजाक गर्ने बानी छ । आफ्नो नजिकका मिल्ने व्यक्तिसँग हाँसीमजाक गर्ने गर्नुहुन्छ । पहिले सानोसानो कुरामा पनि रिसाउनु हुन्थ्यो । मैले उहाँको बानी बुझेपछि त्यहि अनुसारको व्यवहार गर्न थालेँ । जे होस् हामी दुवैमा समझदारी छ । उहाँ सपोर्टिभ, फ्रेण्डली र समझदार हुनुहुन्छ । उहाँ राम्रो गायक हुनुहुन्छ । संगीतको लागि मरिमेट्नु हुन्छ । उहाँ एकदमै राम्रो र असल मान्छे हुनुहुन्छ ।
उहाँको मुख्य रुची भनेको नै संगीत हो । संगीतको लागि मरिमेट्ने । संगीत बाहेक पहिले पेन्टिङ्ग पनि गर्नुहुन्थ्यो । मलाई भेट्नु अघि बाँसुरी पनि बजाउनु हुन्थ्यो रे । उहाँ जे जस्तो काम गर्दा पनि संगीतलाई नै सम्झिरहनु हुन्छ ।
खासै छैन । तर एकचोटि फष्ट रिसेप्सन अवार्डमा बेष्ट भोकल अवार्ड पाउँदा दुवै जना ज्यादै खुसी भएका थियौँ । सायद त्यहि नै हो अविस्मरणीय क्षण ।
मिल्ने कुरामा संगीत नै हो । हामी दुवै जना संगीतमा लागेको व्यक्ति हो भन्नु पर्छ । हाम्रो सोंच पनि मिल्छ । अर्को हामी दुवै जनाको मनमा कुरा लुकाएर राख्ने बानी छैन । जे छ हामी अगाडी नै गर्ने गर्छौँ ।
दुःखको क्षणको कुरा गर्नु पर्दा उहाँ एक चोटि नराम्रोसँग बिरामी पर्नु भएको थियो । हामी काठमाण्डौँ बस्दा उहाँलाई विमारले च्याप्दा निक्कै दुःख लागेको थियो । यो नै हो हाम्रो दुःखद क्षण, त्यसपछि हामी काठमाण्डौँ छोडर पोखरा सिफ्ट भयौँ ।
इतुको मनपर्ने कुराहरु
रङ ः कालो, गुलाबी र निलो
फिल्म ः यही भनेर छैन तर लभ स्टोरी खालको
कलाकार ः अञ्जु पन्त, मनिला सोक्ताङ्ग, राजेश हमाल, भुवन केसी र तृप्ती केसी
पुस्तक ः पुस्तक कम पढ्छु । यो मेरो नराम्रो बानी भन्नुपर्छ । अहिले नेपाली संगीतनारी पढ्दै छु ।
एक अर्कामा समझदारी नभएर हो । अहिले हामी हाम्रो काममा यति बिजी हुन्छौँ कि ? परिवारलाई समय दिन सकिरहेका छैनौँ । परिवारले के चाहान्छ, त्यो थाहा नै हुदैँन । कतिपय चाहेको कुरा भएन भने नराम्रो लाग्ने गर्छ । सायद यही कारणले हिजोआज सम्बन्ध टिक्न सक्दैन ।
रामभक्रको नजरमा इतु
इतुले भनेको जस्तै गीत रेकर्डिङ्गको शिलशिलामा भएको हो । ५६ साल तिरको कुरा हो, लगन फिल्मको गीतको लागि लेडिज सिङ्गगर आवश्यक परेको थियो । उसले गाउने कनफम भएपछि पोखराको बार स्टुडियोमा गीत रेकर्डिङ्ग गराउने समयमा भएको थियो ।
हो, पहिले मैले नै मन पराएको हो । फुलबारी रिसोर्टमा गीत गाउन जाँदा बसमा मैले विवाहको प्रस्ताव गरेको । बिहेको लागि थुप्रै केटी हेरियो । नारायणघाट हुदैँ चितवन पनि पुगियो केटी हेर्न । कोही पनि मन परेन । हामी दुवै एउटै क्षेत्रको । प्राय हामी दुवैजना विहानदेखि बेलुकीसम्म सँगै हुन्थ्यौँ । दिनमा पोखरा एफ.एम. मा सँगै कार्यक्रम चलाउँथ्यौ । कार्यक्रम वरपिपल, तपाईको रोजाई लगायत ४÷५ वटा कार्यक्रम चलाइन्थ्यो । बेलुकी गजल गाउँथ्यौ । हाम्रो विवाह २०५९ साल मंसिर २७ गते विवाह भएको हो ।
विवाह हुनु भन्दा अगाडी मगनी भैसकेपछि मेरो घरमा भाडामा बस्ने एक जना बत्ती बालेर सुतेको थियो । बत्ती खसेर सल्केको आगोले कोठा पुरै जल्यो, त्यो मान्छे पनि पुरै जलेर मृत्यु भयो । विवाह पछि हामी ३ महिना मात्र घरमा बस्यौँ । ‘जाउँ है पोखरा’ कार्यक्रम लिएर दुई जना सँगै विभिन्न ठाउँमा टुर गइयो । १ वर्ष सिंगापुर जाने अवसर पनि मिल्यो । सिंगापुरबाट नेपाल फर्कियौँ । काठमाण्डौँको दरबारमार्गमा गजल गाउने काम गथ्यौँ । त्यसपछि म बिरामी भएर पोखरा आउनुप¥यो । यो बीचमा मैले के सिक्ने अवसर पाएँ भने शुन्य परेको साल कहि जान पनि नहुने रहेछ र आउन पनि नहुने रैछ । कही जानु छ या आउनु छ भने साइत हेराएर समय साल हेर्नुपर्ने रैछ भन्ने चाँहि लागेको छ ।
उ राम्रो गायिका हो, बानी व्यवहार पनि राम्रो छ । सुन्दर अनि सर्वगुण भएकि महिला, उसको सबै कुरा राम्रो छ ।
सर्पोट नभएको भए त, हामी अगाडी बढ्नै सक्दैन थियौ नि ! त्यही सर्पोट र समझदारीले गर्दा आज पनि हामी संगीतको क्षेत्रमा निरन्तर अगाडी बढीरहेका छौँ ।
एकअर्कामा मिल्ने कुरा
हाम्रो विचार मिल्छ । हामी दुवै जना संगीतमा लागेका व्यक्ति हौँ । सधैँ संगीतमै अगाडी बढ्ने सोंच छ । संगीतकै लागि केही न केही गर्ने सोंच छ ।
रङ ः सेतो
फिल्म ः यहि भन्ने छैन, कमेडी खालको, द्धन्द्ध मिसिएको र कहानी भएको
पुस्तक ः नारायण गोपालको जीवनी
कलाकार ः नारायण गोपाल, गोपाल योञ्जन, शान्ती छटाल, अरुणा लामा, अरुण थापा र फत्तेमान
हिजो आज सम्बन्ध नटिक्नुको धेरै कारण छन् । शंकाले लङ्का जलाउँछ । दुवैमा मन मिलेन, करा मिलेन, सहयोग नभएमा, एउटा पछाडी पर्ने, अर्को अगाडी बढेको नरुचाउने, सपोर्ट नहुदाँ, ब्याक सपोर्ट छैन भने सम्बन्ध बिग्रने गर्दछ । अहिले मैले देखेको सुचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग पनि हो । जति बेला पनि फेसबुक चलाएर बस्ने, फेसबुक चलाउने हो,तर हरेक कुराको हद हुन्छ । फेसबुकको धेरै प्रयोगले सम्बन्धमा टकराव ल्याइदिएको जस्तो लाग्छ । अनि फेसबुकमा लामो समय च्याट गरेर बस्दा शंका पैदा हुन्छ । एकले अर्काको फेसबुक खोलेर हेर्दिने गर्दा च्याट गरेको कुरा, कहिले केटी साथीसँग हासीमजाक गरेको कुरा हेर्दा शंका पैदा गराउँछ । एक अर्कामा विश्वास नहुदाँ सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । अहिले डिभोर्स गर्नु, डिभोर्स गरेर अर्काे विवाह गर्नु सिम्पल भैसक्यो । म त यसलाई पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव भन्छु । पश्चिमा संस्कृतिको नक्कल गरेर नेपालीले सक्दैन ।
चौथो मिस कल्चर र दोस्रो मिसेस कल्चर नेपाल हुने
श्रीमतीको हातबाट कुटाइ खाएको सगौरव सुनाउँछन् अभिनेत्री झरना थापाका पति
१७ दिनमा अक्षयको केशरीले कमायो १४० करोड
पहिरो खस्दा जयपृथ्वी राजमार्ग बन्द